အန်တိုနီယို Luna: ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ်သူရဲကောင်း
စစ်သား, ဓာတုဗေဒပညာရှင်, ဂီတပညာရှင်, စစ်မဟာဗျူဟာ, သတင်းစာဆရာ, ဆေးဝါးနှင့်ပူခေါင်းနှစ်လုံးယေဘုယျ, အန်တိုနီယို Luna, ကံမကောင်းသဖြင့်တစ်ဦးခြိမ်းခြောက်မှုအဖြစ်ကိုရိပ်မိခဲ့သူတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောသူဖြစ်၏ ဖိလစ်ပိုင် '' ရက်စက်ပထမဆုံးသမ္မတ Emilio Aguinaldo ။ ရလဒ်အဖြစ် Luna ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ်ပွဲ၏စစ်မြေပြင်ပေါ်ပေမယ့် Cabanatuan ၏လမ်းများပေါ်တွင်မသေ။
တော်လှန်ရေး၌ထသုတ်သင်, Luna ဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ်အတွက်ဗိုလ်မှူးချုပ်အဖြစ်ကခုခံကာကွယ်ဖို့သူ့နိုင်ငံမပြန်မီစပိန်မှပြည်ပရောက်ခဲ့သည်။
သူက 32 နှစ်သမီးအရွယ်မှာလုပ်ကြံခံခဲ့ရခြင်းမပြုမီ, Luna ကိုအလွန်က၎င်း၏စစ်ရေးလာနှစ်ပေါင်းလည်ပတ်မယ်လို့ဘယ်လောက်သကဲ့သို့ကောင်းစွာလွတ်လပ်ရေးများအတွက်ဖိလစ်ပိုင် '' ရန်ပွဲသြဇာလွှမ်းမိုးမှု။
အန်တိုနီယို Luna ၏အစောပိုင်းဘဝ
အန်တိုနီယို Luna က de San Pedro y က Novicio-Ancheta မနီလာ, Laureana Novicio-Ancheta တစ်စပိန် mestiza နှင့် Joaquin ကို Luna က de San Pedro, နယ်လှည့်အရောင်းစာရေး၏သတ္တမသူငယ်၏ Binondo ခရိုင်, အောက်တိုဘာလ 29, 1866 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
အန်တိုနီယိုကိုခြောက်၏အသက်အရွယ်ကနေ Maestro Intong လို့ခေါ်တဲ့ဆရာမနှင့်အတူလေ့လာစန်တို Tomas တက္ကသိုလ်မှဓာတုဗေဒ, ဂီတ, စာပေ၌မိမိလေ့လာမှုများဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ 1881 အတွက် Ateneo စည်ပင်သာယာက de မနီလာကနေဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးပါရမီရှင်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
1890 ခုနှစ်တွင်အန်တိုနီယိုမက်ဒရစ်အတွက်ပန်းချီလေ့လာနေသူကသူ့အစ်ကို Juan, join ဖို့စပိန်နိုင်ငံမှခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီမှာအန်တိုနီယိုတက္ကသိုလ်ဗဟိုက de မက်ဒရစ်ကနေဒေါက်တာဘွဲ့အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်တက္ကသိုလ်က de ဘာစီလိုနာမှာဆေးဆိုင်တစ် licentiate, ရရှိခဲ့သည်။
သူ bacteriology နှင့်လေ့လာဖို့သွား တစ်သျှူးဆိုင်ရာဘာသာရပ် ပဲရစ်အတွက် Pasteur Institute ကမှာအဲဒီရေးရာကိုရှေ့ဆက်ဖို့ဘယ်လ်ဂျီယံမှအပေါ်ဆက်လက်။ စပိန်နိုင်ငံတွင်နေစဉ် 1894 ခုနှစ်တွင်စပိန်အစိုးရပါအချက်အလက်တွေနဲ့အပူပိုင်းရောဂါများအတွက်အထူးကုအဖြစ် post မှသူ့ကိုခန့်အပ်ထားသောကြောင့်, Luna ငှက်ဖျားအပေါ်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာလက်ခံရရှိစက္ကူပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သူမနီလာအတွက်စည်ပင်သာယာဓာတ်ခွဲခန်းများ၏အကြီးအကဲဓာတုဗေဒပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိရာနောက်ပိုင်းတွင်ထိုနှစျ, အန်တိုနီယို Luna ဖိလစ်ပိုင်သို့ပြန်သွား၏။ သူနှင့် Juan တစ်ဦးခြံစည်းရိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းထူထောင်မိမိညီအစ်ကိုကိုမြို့တော်အတွင်း Sala က de Armas တောင်းဆိုခဲ့သည်။
အဲဒီမှာနေစဉ်, ညီအစျကို Katipunan ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတစ်ဦးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းကပူးပေါင်းအကြောင်းကိုချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည် Andres Bonifacio ၏ 1892 နှငျဒဏျမှတုန့်ပြန် ဟိုဆေး Rizal , ဒါပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံး Luna ကညီအစ်ကိုတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ငြင်းဆန် - ကြောင်းဇာတ်စင်မှာ, သူတို့ကစနစ်တခုတဖြည်းဖြည်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ဟုယုံကြည် အစားစပိန်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်တော်လှန်ရေးထက်။
သူတို့က Katipunan အဖွဲ့ဝင်များမဟုတ်ကြပေမယ့်, အန်တိုနီယို, Juan, သူတို့၏အစ်ကိုဟိုဆေးအားလုံးစပိန်အဖွဲ့အစည်းတည်ရှိကြောင်းလေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာသြဂုတ်လ 1896 ခုနှစ်တွင်အဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသည်။ သူ့အစ်ကိုတွေစစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိ, ဒါပေမယ့်အန်တိုနီယိုအတွက်ပြည်ပရောက်ထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် စပိန် နှင့် Carcel Modelo က de မက်ဒရစ်အတွက်ထောင်ချခံရ။ ဤအချိန်အားဖြင့် Juan တစ်ကျော်ကြားတဲ့ပန်းချီဆရာ, 1897 ခုနှစ်တွင်အန်တိုနီယိုရဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်စပိန်တော်ဝင်မိသားစုနှင့်အတူမိမိအဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
မိမိအပြည်ပရောက်နှင့်ထောင်ဒဏ်ပြီးနောက်နားလည်သဘောပေါက်, စပိနျကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ရေးဆီသို့အန်တိုနီယို Luna ရဲ့သဘောထားကပြောင်းလဲခဲ့ - ခြင်းကြောင့်မိမိကိုမိမိနှင့်သူ၏ညီအစ်ကိုများ၏မတရားကုသမှုနှင့်သူ၏မိတျဆှေဟိုဆေး Rizal ယခင်ဒီဇင်ဘာလ၏ကွပ်မျက်ရန်, Luna စပိန်ဆန့်ကျင်လက်နက်ကိုတက်ယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
မိမိအပုံမှန်အားဖြင့်ပညာသင်နှစ်ဖက်ရှင်အတွက်, Luna နာမည်ကြီးအောက်မှာပြောက်ကျားစစ်နည်းဗျူဟာ, စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လယ်ကွင်းခံတပ်ကိုလေ့လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ဘယ်လ်ဂျီယံ သူဟောင်ကောင်ကိုရွက်လွှင်မတိုင်မီစစ်တပ်ပညာပေး Gerard Leman ။ အဲဒီမှာသူကတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်-In-ပြည်ပရောက်, Emilio Aguinaldo နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့် 1898 ဇူလိုင်လထဲမှာ Luna တခါပိုရန်ပွဲကိုတက်ယူဖိလစ်ပိုင်သို့ပြန်သွား၏။
အဆိုပါအဖြစ် အမေရိကန်စစ်ပွဲ / စပိ အနီးကပ်, နှင့်လုပ်ကြံစပိန်မှလာသောဖိလစ်ပိုင်ကနေဆုတ်ခွာဖို့ပြင်ဆင်, ဖိလစျတော်လှန်ရေးတပ်များမနီလာ၏မြို့တော်မြို့ကိုဝိုင်းကြ၏။ အဆိုပါအသစ်ရောက်ရှိလာအရာရှိချုပ်အန်တိုနီယို Luna အမေရိကန်တွေရောက်လာတဲ့အခါပူးတွဲသိမ်းပိုက်သေချာစေရန်မြို့ထဲသို့တပ်တွေပေးပို့ဖို့အခြားတပ်မှူးများအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် Emilio Aguinaldo မနီလာပင်လယ်အော်အခြေစိုက်အမေရိကန်ရေတပ်အရာရှိများကြောင့်သင်တန်းအတွက်ဖိလစ်ပိုင်မှအာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန်မယ်လို့ယုံကြည်ငြင်းဆန်ခဲ့သည် ။
သူတို့ luna placate ရန် 1898. ၏သြဂုတ်လလယ်ပိုင်းတွင်မနီလာမှာရှိတဲ့ဆင်းသက်တစ်ချိန်က luna ဒီမဟာဗျူဟာမြောက်အမှားအဖြစ်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့များရဲ့မတရားစွာကျင့်ကြံပြုမူအကြောင်းကိုပြင်းစွာညည်းညူ, Aguinaldo စက်တင်ဘာလ 26, 1898 ရက်တွင်ဗိုလ်မှူးချုပ်များ၏ရာထူးကသူ့ကိုရာထူးတိုးနှင့်အမည်ရှိသော စစ်ပွဲစစ်ဆင်ရေး၏သူ့ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်။
အထွေထွေ Luna ပိုကောင်းစစ်တပ်စည်းကမ်း, အဖှဲ့အစညျး, ယခုအသစ်ကကိုလိုနီအစိုးရသောမင်းတို့အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတက် setting ခံခဲ့ရသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားမှချဉ်းကပ်ဘို့စည်းရုံးရေးဆက်လက်။ နှင့်အတူ Apolinario Mabini , အန်တိုနီယို Luna အမေရိကန်တွေဖိလစ်ပိုင်လွတ်မြောက်လိုမထင်ခဲ့ဘူးကြောင်း Aguinaldo သတိပေးခဲ့သည်။
အထွေထွေ Luna စနစ်တကျစိတ်အားထက်သန်ခဲ့ကြသည်နှင့်များစွာသောကိစ္စရပ်များတွင်ပြောက်ကျားစစ်အတွက်ကြုံတွေ့ပေမယ့်နည်းနည်းတရားဝင်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခဲ့သူဖိလစ်ပိုင်တပ်များ, လေ့ကျင့်ရန်စစ်တပ်အကယ်ဒမီဘို့လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ 1898 ၏အောက်တိုဘာလအတွက်, Luna ယခုဖိလစ်ပိုင်-အမေရိကန်စစ်ပွဲ 1899 ၏ဖေဖော်ဝါရီလထုတ်ဖဲ့န်ထမ်းများနှင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများစစ်အားထုတ်မှု join နိုင်အောင်အတန်းကိုဆိုင်းငံ့ခဲ့သည်မတိုင်မီလျော့နည်းတဲ့ဝက်ထက်တစ်နှစ်လည်ပတ်ရသောဖိလစ်ပိုင်စစ်ဘက်အကယ်ဒမီ, သည်အဘယ်အရာကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။
အထွေထွေ Luna သူအတွက်ရေတပ်ကနေမြေပြင်တပ်ဖွဲ့နှင့်ရေတပ်အမြောက်တပ်မီးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ရာ, La Loma မှာအမေရိကန်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မှစစ်သားသုံးယောက်ကုမ္ပဏီများမှဦးဆောင် မနီလာပင်လယ်အော် သည့်ဖိလစ်ပိုင်မိုးသည်းထန်စွာထိခိုက်သေဆုံးမှုခံစားခဲ့ရ - ။
ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့တွင်တစ်ဦးကဖိလစျတန်ပြန်အချို့မြေပြင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် Cavite ကနေတပ်တွေသူတို့သာ Aguinaldo ကိုယ်တော်တိုင်မိန့်ကိုလိုက်နာမယ်လို့ဖျောဗိုလ်ချုပ်ကြီး Luna ကနေအမိန့်ယူရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါပြိုကျ။ & Furious, Luna အဆိုပါ recalcitrant စစ်သားစက်များကိုပေမယ့်နောက်ကျောကရြောကျရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။
အဆိုပါ undisciplined နှင့် clannish ဖိလစ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့်အတူအများအပြားထပ်တိုးမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံများပြီးနောက်နှင့် Aguinaldo သည်သူ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသမ္မတအိမ်တော်စောင့်တပ်ဖွဲ့အဖြစ်နာခံမှုမရှိ Cavite တပ်များ rearmed ပြီးမှ, တစ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်စိတ်ပျက်အထွေထွေ Luna Aguinaldo တုံ့လက်ခံခဲ့သည်ရာ Aguinaldo, ရန်သူ၏နှုတ်ထွက်စာတင်သွင်းခဲ့ပါသည်။ စစ်ပွဲကိုနောက်သုံးပတ်ကျော်ကဖိလစ်ပိုင်အဘို့အလွန်ဆိုးရွားစွာသွားအတူ, သို့သော်, Aguinaldo ပြန်သွားဖို့ Luna ဖျောင်းဖျခြင်းနှင့်သူ့ကိုတပ်မှူး-In-ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
Luna ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ရှည်လျားလုံလောက်စွာတောင်ပေါ်မှာတစ်ပြောက်ကျားတပ်စခန်းဆောက်လုပ်ဖို့အမေရိကန်တွေဆံ့ဖို့အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုကျစ်လူထောင်ချောက်နှင့်ကျေးရွာမှရွာကနေတောတွင်းသရုပ်ဆောင်ကြောင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမြွေ၏အပြည့်အဝတွင်းနှင့်အတူပြည့်စုံ, ဝါးတုတ်ကျင်းတစ်ကွန်ယက်၏ပါဝင်သည်။ ဖိလစျတပ်ဖွဲ့များသည်ဤ Luna ကာကွယ်ရေးလိုင်းကနေအမေရိကန်တွေအပေါ်ပစ်ခတ်, ပြီးတော့အမေရိကန်မီးမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်မပါဘဲတောတွင်းသို့ကွယ်ပျောက်နိုင်ဘူး။
သို့သော်မေလနှောင်းပိုင်းတွင်အန်တိုနီယို Luna ရဲ့အစ်ကို Joaquin ကိုအတွက် - တော်လှန်ရေးစစ်တပ်အတွက်ဗိုလ်မှူးကြီး - အခြားအရာရှိများ၏နံပါတ်သူ့ကိုသတ်ပစ်ဖို့လျှို့ဝှက်ကြံစည်ခဲ့ခဲ့ကြသည်သောသူ၏သတိပေးခဲ့သည်။ အထွေထွေ Luna ကဤအရာရှိများအများတို့သည်လည်းစည်းကမ်းအဖမ်းခံရ, ဒါမှမဟုတ်စက်များကိုသူတို့ပြင်းစွာမိမိအတင်းကျပ်, အာဏာရှင်စတိုင်နာကြည်းပေမယ့်အန်တိုနီယိုကသူ့အစ်ကိုရဲ့သတိပေးချက်ကို၏အလင်းကိုဖန်ဆင်းနှင့်သမ္မတ Aguinaldo မည်သူမဆိုစစ်တပ်ရဲ့တပ်မှူး-in ကိုလုပ်ကြံရန်မှခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ကိုနှစ်သိမ့်စေခြင်းအမိန့်ထုတ် -Chief ။
ဆန့်ကျင်ရန်, အထွေထွေ Luna ပထမ, စန်းဖာနန်ဒိုမှာအမေရိကန်တွေဆန့်ကျင်နေတဲ့တန်ပြန် join ဖို့သူ့ကိုမေးခဲ့တယ် Pampanga အဘိဓါန်များနှင့်ဒုတိယမြို့တော်သစ်, Cabanatuan, Nueva Ecija မှ Luna မိန့်, Aguinaldo ထံမှခဲ့ဇွန်လ 2, 1899. အပေါ်နှစ်ခုကြေးနန်းများကိုလက်ခံရရှိ ဖိလစ်ပိုင် '' တော်လှန်ရေးအစိုးရအသစ်တခုကက်ဘိနက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာအကြောင်းကို 120 ကီလိုမီတာမနီလာ၏မှုကြောင့်မြောက်, ။
အစဉ်အဆက်ရည်မှန်းချက်ကြီးနှင့်ဝန်ကြီးချုပ်အမည်ရှိခံရမျှော်လင့်ချက်, Luna 25 ယောက်ျားတစ်ဦးမြင်းစီးသူရဲအစောင့်အကြပ်နှင့်အတူ Nueva Ecija သှားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ သို့သော်ကြောင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲများရန်, Luna တပ်ဖွဲ့များကျန်ရစ်ခဲ့ဘဲလျက်အတူနှစ်ခုသာသည်အခြားအရာရှိများ, ဗိုလ်မှူးကြီးရောမနှင့်ဗိုလ်ကြီး Rusca ဖြင့်လိုက်ပါသွား Nueva Ecija ရောက်ရှိလာသည်။
အန်တိုနီယို Luna ရဲ့မထင်မှတ်မရဏ
ဇွန်လ 5, 1899 တွင်, Luna ကသမ္မတ Aguinaldo နှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်အစိုးရကိုဌာနချုပ်ကိုတစ်ဦးတည်းသွား၏ပေမယ့်အစားအရှိသည်သူ၏ဟောင်းနွမ်းရန်သူများကိုတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ခဲ့သည် - အစည်းအဝေးဖျက်သိမ်းလိုက်ခြင်းနှင့် Aguinaldo ခဲ့သောသူ၏အကြောင်းကြားသောသူမူကားတစ်ချိန်ကသူရဲဘောကြောင်များအတွက်စက်များကိုဖူးသောသူ, မြို့ထဲက။ & Furious, Luna တစ်ရိုင်ဖယ်ရိုက်ချက်အပြင်ဘက်ကိုချွတ်သွားသောအခါလှေကားကဆင်းပြန်လမ်းလျှောက်ဖို့စတင်ခဲ့သည်။
Luna သူ insubordination များအတွက်ပယ်ချခဲ့ Cavite အရာရှိများ၏တဦးတည်းတွေ့ဆုံခဲ့ရှိရာလှေကားဆင်းပြေးလေ၏။ အဆိုပါအရာရှိကသူ့ bolo နှင့်အတူဦးခေါင်းအပေါ် Luna ဒဏ်ခတ်ခြင်းနှင့်မကြာမီ Cavite တပ်များသူ့ကို stabbing, ဒဏ်ရာရသူယေဘုယျပွားစှာမှေးဖှား။ Luna ကသူ့ခြောက်လုံးပြူးကိုဆွဲငင်ခြင်းနှင့်ပစ်ခတ်, ဒါပေမယ့်သူကသူ့တိုက်ခိုက်သူတွေလွဲချော်။
သို့တိုင်သူသည်ရောမနှင့် Rusca သူ့ကိုကူညီပွေးရှိရာ Plaza, ထွက်သည်မိမိသွားရာလမ်းကိုစစ်တိုက်ကြ၏, ဒါပေမယ့်ရောမသေခြင်းသို့သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ Rusca ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ စွန့်ပစ်နှင့်တစ်ဦးတည်း, Luna သူသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစကားများမြွက်ရှိရာ Plaza ၏ cobblestones မှသွေးထွက်နစ်မြုပ်: "! ဝပ်လုပ်ကြံခံရ" သူက 32 နှစ်သမီးအရွယ်မှာသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
စစ်ပွဲအပေါ် luna ရဲ့သက်ရောက်မှု
Aguinaldo ရဲ့အစောင့်ကသူ့အများဆုံးတတ်နိုင်ယေဘုယျလုပ်ကြံခံရသည့်အတိုင်းသမ္မတကိုယ်တော်တိုင်အထွေထွေ Venacio Concepcion, အအသတ်ခံယေဘုယျအနေနဲ့မဟာမိတ်များ၏ဌာနချုပ်ကိုဝိုင်းရံတင်သောခဲ့သည်။ Aguinaldo ထို့နောက်ဖိလစ်ပိုင်ကြည်းတပ်အနေဖြင့် Luna ရဲ့အရာရှိများနှင့်ယောက်ျားပယ်ချခဲ့သည်။
အမေရိကန်တွေအဘို့, ဒီ internecine တိုက်ပွဲများလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ် James အက်ဖ်ဘဲလ် Luna "ဟုသာယေဘုယျခဲ့ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ခဲ့" နှင့် Aguinaldo ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအန်တိုနီယို Luna ရဲ့လူသတ်မှု၏ပါတီအားအတွက်ဆိုးရွားရှုံးနိမ့်ပြီးနောက်ဆိုးရွားရှုံးနိမ့်ခံစားခဲ့ရကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ Aguinaldo မတ်လ 23, 1901 ရက်တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများကဖမ်းမိမခံရမီ, ဆုတ်ခွာနေအတွက်လာမယ့် 18 လအများစုနေခဲ့ရသည်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Assault နှင့်အလွဲသုံးမှုအကြောင်းမေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ထိပ်တန်းမက်ဆာချူးဆက်ကောလိပ်များသို့ဝင်ရောက်ခြင်းများအတွက် SAT ရမှတ်များ
Cygnus X ကို-1: တစ်အလုပ်များကြယ်နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းခြင်း
အမှား Fix နှင့်ပန်းချီအတွက်အပြောင်းအလဲများ Make လုပ်နည်း
ကမျြးစာကိုကျိုးနွံအကြောင်း Says ကဘာလဲ
Prokaryotes ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ Eukaryotes: အကွာခြားချက်များဘာတွေလဲ?
Pericles '' စျာပနအခမ်းအနားအဟောအပွောကောငျး - Thucydides '' ဗားရှင်း
စာရင်းစစ်ကျင်းပခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုနည်းအဆိုပါ Ultimate Form ကို
သိပ္ပံ Ology စာရင်း
Web ပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးအခမဲ့ခရစ်ယာန် / ဝငျကမျြး Lyrics ဆိုဒ်များ
စက္ကူခေါက်ခြင်း Yoda ၏ထူးဆန်းဖြစ်ရပ်မှန်